केकीको ‘कोहलरपुर एक्सप्रेस’ले कस्तो गर्यो व्यापार ? « Ramailo छ
केकीको ‘कोहलरपुर एक्सप्रेस’ले कस्तो गर्यो व्यापार ?
प्रकाशित मिति : Apr 29, 2018
समय : 11:32 am
गत शुक्रबार, बैशाख १४ गतेदेखि नायिका केकी अधिकारीले निर्माण गरेको फिल्म ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ प्रदर्शनमा आइरहेको छ । लेडी लिडिङ कमेडी फिल्मले व्यापार कस्तो गर्यो त ?
‘शनिबारको व्यापारबाट खुसी छौं’, पहिलो पटक फिल्म निर्माण गरेकी केकीले भनिन्, ‘दर्शकले पनि रमाईलो मानेर हेर्नु भयो । उहाँहरुको प्रतिक्रिया राम्रो छ ।’ प्रदर्शनको पहिलो दिन शुक्रबार भने फिल्मले सोचे अनुसार दर्शक हलमा तान्न नसकेको केकीले स्विकारिन् । ‘शुक्रबार राम्रो गर्छ भन्ने लागेको थियो । तर हामीलाई हलिउड फिल्मले थिच्यो । धन्न शनिबार दर्शक आउनु भयो यसको लागि हामी उहाँहरुप्रति आभारी छौं ।’ केकी र प्रियंकासँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
शनिबार दिउँसो २ बजेपछि कोहलपुर एक्सप्रेस का राजधानीका सबै जसो शो हाउसफूल थिए । हाउसफूल दर्शकमाझ केकी फिल्मको प्रतिक्रिया बुझ्न पुगेकी थिइन् । भिडियो हेर्नुस् :
विशाल भण्डारी निर्देशित फिल्ममा केकी सहित नायिका प्रियंका कार्की, ऋचा शर्मा, बुद्धि तामाङ, विनोद न्यौपाने, रविन्द्र झा, कुशाग्र भट्राई लगायत कलाकारहरुको अभिनय छ । सोमबार र मंगलबार परेको सार्वजनिक बिदामा हलमा दर्शकको उपस्थिति राम्रो हुने आशा छ । केकी र ऋचासँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :